च्याम्पियन्स लिगको नयाँ सिजन आजबाट सुरु हुँदै, कुन कुन क्लब खेल्दै छन् ? Canada Nepal
च्याम्पियन्स लिगको नयाँ सिजन आजबाट सुरु हुँदै, कुन कुन क्लब खेल्दै छन् ?
काठमाडौं - युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको नयाँ सिजन मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ । गत सिजन कोरोना महामारीका कारण पोर्चुगलको लिस्वनमा भएको च्याम्पियन्स लिग यसपटक भने होम एन्ड अवेका आधारमा आयोजना हुनेछ ।
प्रत्येक टोलीले आ–आफ्नो समूहका टोलीबीच होम एन्ड अवेका आधारमा खेल्नेछन् । लिगको पहिलो दिन महत्वपूर्ण मानिएको बार्सिलोना र बायर्न म्युनिखबीचको खेल छ । यस्तै, साविक विजेता चेल्सी र प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेष्टर युनाइटेडले आ–आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीसँग खेल्ने छन् ।
पहिलो खेलमा समूह ‘एफ’ का योङ ब्वाइज र म्यानचेष्टर युनाइटेडबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति साढे १० बजे सुरु हुनेछ । योङ ब्वाइजको मैदानमा हुने खेलमा म्यानचेष्टरका क्रिष्टियानो रोनाल्डोसमेत उपलब्ध हुने छन् । सोही समयमा समूह ‘जी’ का सेभिल्ला र साल्र्जबर्ग आमनेसामने हुने छन् । खेल सेभिल्लामा हुनेछ ।
यस्तै, मध्यरातमा ६ खेल रहेको छ । सम्पूर्ण खेल नेपाली समयअनुसार पौने १ बजे सुरु हुनेछ । पहिलो खेलमा समूह ‘ई’ का ड्यनामो केइभ र बेन्फिका भिड्ने छन् । खेल केइभको मैदानमा हुनेछ ।
यसपछि बहुप्रतीक्षित बार्सिलोना र बायर्न म्युुनिखबीचको खेल हुनेछ । समूह ‘इ’ अन्तर्गतको खेल बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा हुनेछ । स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीबिना बार्सिलोनाले पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिग खेल्न लागेको हो । अघिल्लो वर्ष बायर्नले बार्सिलोनालाई ८-२ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । यता, समूह ‘ए’ का भिल्लारियल र एटालान्टाबीच राति पौने १ बजे खेल छ । खेल भिल्लारियलको मैदानमा हुनेछ ।
समूह ‘जी’ अन्तर्गत लस र उल्फसबर्ग भिड्ने छन् । यस्तै, समूह ‘एच’ मा दुई खेल रहेको छ । माल्मोले युभेन्ट्सको सामना गर्नेछ । खेल माल्मोको घरेलु मैदानमा हुनेछ । अन्तिम खेलमा चेल्सीले लन्डनमा जेनिटको सामना गर्नेछ । न्युज कारखाना
भाद्र २९, २०७८ मंगलवार १४:१६:४० बजे : प्रकाशित
# यूईएफए च्याम्पियन्स लिग